स्वस्तिमाले लगाएकाे लेहेँगाकाे मुल्य सुन्दै तर्सिने! यस्तो हट अवतारमा देखिइन स्वस्तिमा (तस्विरहरू सहित) – PathivaraOnline
Home > गसिप > स्वस्तिमाले लगाएकाे लेहेँगाकाे मुल्य सुन्दै तर्सिने! यस्तो हट अवतारमा देखिइन स्वस्तिमा (तस्विरहरू सहित)
स्वस्तिमाले लगाएकाे लेहेँगाकाे मुल्य सुन्दै तर्सिने! यस्तो हट अवतारमा देखिइन स्वस्तिमा (तस्विरहरू सहित)
admin May 9, 2020 May 9, 2020 गसिप, जीवनशैली, मनोरञ्जन	0
फिल्मिनगरिमा फिल्म भन्दा बढी फिल्मी गीतबाट चर्चा कमाएकी नायिका हुन् स्वस्तिमा खड्का । उनले फिल्म होस्टेल रिटर्न्स बाट डेब्यु गरेकी गरेकी हुन् । उनलाई कुटुमा कुटु गीतले अझ थप चर्चामा ल्यायो। सन् २०१५ देखि नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा सक्रिय हुँदै आएकी स्वस्तिमाले हालै इन्स्टाग्राममा लेहेङ्गामा सजिएकी तस्विर शेयर गरेकी छिन् ।
अहिले नेपाली नायिकाहरुले लगाएको लेहेंगाको निक्कै चर्चा हुन थालेको छ। चर्चा हेर्दा राम्रो भन्दापनी त्यस लेहेंगाको मुल्यको हुने गर्छ। यसको मुख्य श्रेय जान्छ नायिका आँचल शर्मालाई। आँचलले आफ्नो बिहेमा लगाएको लेहेंगाको मूल्य सुनेर धेरैले जिब्रो टोकेसंगै अचेल लेहेंगाको मुल्यमा धेरैको ध्यान तानिन थालेको हो। यसै बिच स्वस्तिमाले आफ्नो इन्स्ट्राग्राममा लेहेंगा लगाएको तस्बिरहरु शेयर गरेकी हुन् ।
उक्त तपस्विरमा उनि निकै सुन्दरी देखिएकी छिन् । उनले भुटानी शरणार्थीको कथामा बन्ने अङ्ग्रेजी भाषाको फिल्ममा पनि अभिनय गर्ने पक्का भएकी छिन् ।
दर्जनौ नेपाली फिल्ममा अभिनय गरेर चर्चा कमाएकी उनले फिल्म बुलबुल बाट राष्ट्रिय अवार्ड हात पारेकी थिइन् । पछिल्ले समय उनि नेपाली फिल्म चपली हाईट ३ मा अभिनय गर्ने गरिरहेकि छिन् । केहि समय पहिला स्वस्तिमाले म्यानमार पुगेर बोल्ट अबतारका तस्विर सामाजिक संजाल मार्फत शेयर गरेकी थिइन् ।
हेर्नुस स्वस्तिमा हट अवतारमा
समाचार फिल्मीबजबाट । तस्विर: स्वस्तिमा खड्काको इन्स्टाग्रामबाट
नबिना लामालाई दिल निशानी मगरले प्रचण्डको हैसियत यसरी चिनाउँदै…
ह्वाइट हाउस भित्रै छिर्यो कोरोना!